Hello Nepal News » क्लब छाड्ने निर्णय फिर्ता लिँदा मेस्सीका ‘आक्रोशपूर्ण र पीडादायी’ १० भनाइ
क्लब छाड्ने निर्णय फिर्ता लिँदा मेस्सीका ‘आक्रोशपूर्ण र पीडादायी’ १० भनाइ
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान तथा प्रमुख फरवार्ड लिओनल मेस्सीले अन्ततः क्लब छाड्न निर्णय फिर्ता लिँदै बार्सिलोनामै भविष्य निरन्तरता गर्ने घोषणा गरेका छन् । एक साताअघि क्लबलाई ब्युरोफ्याक्स पठाएर क्लब छाड्ने निर्णय दिएका उनले त्यसपछि पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेका हुन् ।
च्याम्पियन्स लिगमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखसँग क्वार्टरफाइनलमा भोगेको ८–२ को बेइज्जतीपूर्ण हारको पीडाबीच मेस्सीले अप्रत्यासित रूपमा क्लब छाड्ने निर्णय गरेका थिए । उनी हालका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउको नेतृत्व र क्लबको कमजोर खेल योजनाका कारण निराश बनेर क्लब छाड्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको थियो ।
उनले २० वर्षदेखि रहँदै आएको क्लब छाड्नुका थुप्रै कारण भए पनि च्याम्पियन्स लिगमा लगातार बेइज्जतीपूर्ण हार भोग्नु, ठूला उपाधि जित्न नसक्नु र टिमको नतिजा बर्सेनि ओरालो लाग्दै जानु प्रमुख कारण थिए । लगातार खराब नतिजाको सिकार हुँदा मेस्सी बार्सलोनामा रहिरहन चाहँदैनथिए । त्यही भएर पनि उनले क्लब छाड्ने निर्णय गरेका थिए ।
तर, उनले भनेजसरी क्लबले फ्रि ट्रान्सफरमा जान नदिने अडान लिएपछि साथै उनलाई लैजाने भनिएको क्लब म्यानचेस्टर सिटीले उनको रिलिज क्लजको ७०० मिलियन युरो तिर्न नसक्ने भएपछि मेस्सीले बाध्य बनेर क्लब छाड्ने निर्णय फिर्ता लिए । उनले क्लब छाड्न कानुनी बाटो समात्न सक्थे । तर, त्यसो नगरी बार्सिलोनामै रहने निर्णय गरे । क्लब छाड्ने निर्णय गरेर पुनः निर्णय फिर्ता लिएपछि कतिपयले मेस्सीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउन पनि थालेका छन् ।
गत राति चर्चिच खेल संस्था ‘गोल’सँग कुरा गर्दै मेस्सीले क्लब छाड्ने निर्णय फिर्ता लिएर र बार्सिलोनामै रहने बताए । सोक्रममा उनले आफूले क्लब छाड्नुपर्ने कारणहरू खुलाए भने भावी योजनासमेत सुनाए । मेस्सीले क्लब छाड्ने निर्णयको कारण क्लबको नेतृत्व र च्याम्पियन्स लिगमा बर्सेनि बेइज्जतीपूर्ण हारलाई स्वीकारेका छन् । यहाँ मेस्सीले भनेका प्रमुख भनाइ राखिएको छ–
१. म क्लबसँग खुसी थिइनँ । म साँच्चै छाडेर जान चाहन्थें । ब्युरोफ्याक्समार्फत् मेरो चाहना क्लबसँग राखेको थिएँ । तर, अध्यक्षले आफ्नो वचन पूरा गरेनन् । उनले मलाई सधैं भन्थे– हरेक सिजनको अन्त्यपछि क्लब छाड्ने स्वतन्त्रा तिमीलाई हुनेछ । तर, जब मैले क्लब छाड्न चाहें, मलाई अन्य कारण देखाएर दिइएन । यो धोका हो ।
२. जब मैले क्लब छाड्ने निर्णय गरें र परिवामा भनें, त्यहाँ सोच्दै नसोचेको स्थिति आयो । सबैजना रुन थाले । र, बार्सिलोना नछाड्ने जिद्दी कसे । बार्सिलोना छाडेपछि बच्चाहरूले स्कुल परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो, नयाँ साथीहरू बनाउनुपर्थ्यो । त्यही भएर पनि बच्चाहरूले मेरो निर्णय मानेनन् । उनीहरूले रुँदै बार्सिलोना नछाड्न भने । म र श्रीमती त्यो देखेर निकै भावुक भयौं ।
३. मैले दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ क्लब छाड्न चाहेको थिएँ । म अझै केही वर्ष उच्च स्तरमा खेल्न र उपाधि जित्न सक्छु । मेरो लक्ष्य भनेको अझै एक च्याम्पियन्स लिग जित्नु हो । अहिले मसँग यो चार उपाधि छ । तर, म कम्तीमा पाँच उपाधि चाहन्छु । हामीले बार्सिलोनामा पछिल्ला पाँच सिजन यो प्रतियोगिता जित्न सकेनौं । जतिपटक आउट भयौं, त्यो लज्जास्पद थियो । यस कुराले मलाई निकै दुखाउँछ । खेलमा हारजित हुन्छ । तर, हार पनि सम्मानजनक हुनुपर्छ ।
४. अब म यो सिजन यहीं रहनेछु । म यहाँ रहनुपर्ने अरू कुनै कारण छैन । अध्यक्षले मलाई ७०० मिलियन नतिरी बाहिर जान नदिने भएपछि म यहाँ बस्न बाध्य छु । मलाई थाहा छ, कुनै पनि क्लबले कोही एक खेलाडीका लागि ७०० मिलियन खर्च गर्ने कुरा असम्भव छ । त्यसैले म फ्रि ट्रान्सफरमा जान चाहन्थें ।
५. मैले क्लब छाड्ने निर्णय जुन १० मा लिनुपर्ने थियो भन्ने क्लबको कुरा छ । जबकि, त्यसबेला कोरोना भाइरसका कारण हामीले धमाधम लिग खेल्दै थियौं । सिजन महत्त्वपूर्ण चरणमा थियो । मेरो ध्यान खेल र टिममा थियो । त्यसबेला मैले कसरी क्लब छाड्ने निर्णय लिन सक्थें ? मलाई लाग्यो, सिजन सकिएपछि मैले निर्णय लिन पाउनेछु । कानुनी आधारमा अझै पनि पाउँछु । तर, क्लबले मलाई जुन १० को मितिलाई लिएर अप्ठेरोमा पार्न खोज्यो ।
६. हामी खेल हार्न सक्छौं । तर, बार्यन म्युनिखसँगजस्तो ८–२ ले वा लिभरपुलसँग जस्तो ४–० ले हार्नु अति नै पीडादायी हुनछ । त्यस्तो खेल हुन सक्दैन । पछिल्ला चार सिजन हामीले युभेन्टस, रोमा, लिभरपुल र बार्यनसँग जसरी हार भोग्यौं, ती निकै पीडादायी थए । यी नतिजाले पनि मलाई बार्सिलोना छाड्न बाध्य बनायो । जब हामी बार्यनसँग पराजित भयौं, मलाई थुप्रै दिन निद्रा लागेन । परिवारसँग बोल्न र हाँस्न पनि मन लागेन ।
७. क्लब छाड्न नै चाहेको भए मैले बार्सिलोनाविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्थें । तर, २० वर्ष बसेको क्लबलाई अदालतसम्म लिएर जान म सक्दैनथिएँ । किनभने, यो क्लब मेरो घर र जीवन दुवै हो । यही क्लबबाट मैले एक खेलाडीका रूपमा सबै कुरा जितेको छु । यो क्लब मेरो जीवन हो । र, मैले यहीं आफ्नो जीवन बनाएको छु । अनि म कसरी मुद्दा हालेर अलग हुन सक्छु ?
८. कुनै दिन यस्ता कुरा भन्न नपरोस् भन्ने लागेको थियो । तर, अहिले भन्नैपर्ने समय आयो । बार्सिलोना अहिले जसको नेतृत्वमा छ, उनी एक दुर्घटना हुन् । जोसँग क्लबलाई अघि बढाउने क्षमता छैन र राम्रो खेल योजना छैनन् । यस्तो नेतृत्वबाट हामी खेल र उपाधि दुवै जित्न सक्दैनौं । हामी केवल अरूबाट पीडित बन्न मात्रै सक्छौं । मलाई यो कुराले सबैभन्दा बढी क्लब छाड्ने निर्णय लिन बाध्य बनायो ।
९. म बार्सिलोनालाई अति नै माया गर्छु । किनभने, मैले यहाँ धेरै लामो समय बिताइसकें । यहाँबाट बाहिर गएर म योभन्दा राम्रो ठाउँ कहीं पनि पाउन सक्दिनँ । यहाँ मेरा पुराना सहकर्मी छन् । सबै परिवारका सदस्यजस्तै छन् । अर्को ठाउँमा गएर यस्तो वातावरण बनाउन र पाउन अरू १०–१५ वर्ष लाग्न सक्छ ।
१०. मैले अघि पनि भनें, म रहरले यहाँ बस्दै छैन । क्लबले जान नदिएपछि बाध्य भएर बसिरहेको छु । तर, थप एक सिजन यहाँ रहँदा म सधैं झैं आफ्नो काम गर्नेछु । टिमलाई अघि बढाउन र जिताउन आफ्ना तफबाट सक्दो योगदान दिने नै छु । टिमलाई सघाउन म कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन । यस सिजन म बार्सिलोनाबाट सबै उपाधि जित्न र जिताउन चाहन्छु ।
प्रकाशित मिति २० भाद्र २०७७, शनिबार ०५:४४